OPS Auto Detailing Supplies, fanadiovana an-trano an-trano ankafiziko | Blog
Takela-by 10 Pieces effervescent fanadiovana miaraka amin'ny fluide 40 Liters Washer
Aogositra 20, 2020 Aogositra 20, 2020 by admin@opskar.com
Eny an-tsena, misy mpivarotra sasany manome takelaka fanasana lamba fitaratra. Fa maninona no mifidy antsika?
Sariaka amin'ny tontolo iainana ary tsy misy fahasimbana eo am-baravarankely
Fanaparitahana mahomby ary tsy mamela soritra.
Esory haingana ny diloilo, ny loto, ny vovoka.
Alefaso ny mpanadio ary ahena ny tabataba.
Diovy ny varavarankely ary mitondra fiara soa aman-tsara.
Takelaka lehibe iray lehibe (5 grama), mitovy amin'ny tsiranoka miora lehibe!
Fahafaham-po 100% amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa nomena.
Ahoana no fiasan'ny takelaka fanadiovana mahomby?
- Mandaitra be amin'ny fanesorana ny spashes bibikely, tain-vorona, ranon-kazo ary loto amin'ny arabe eo amin'ny fitaratra anao. Azonao atao koa ny mampiasa azy io hanadiovana fitaratra sy ny faritra hafa rehetra izay mila manjelanjelatra sy mamirapiratra! Azo antoka ho an'ny metaly, fitaratra ary vera, fingotra, plastika ary loko rehetra.
- Tsy mamela soritra na taratry ny fisehoana sy ny fiarovana bebe kokoa. Ankoatr'izay, tsy misy ao anatiny
fluorescent agents ary tsy manimba fitafiana sy vatana. Ekolojika, biodegradable, tsy misy fosfat,
ary ny rijan-tsiranoka tsy misy fofona. Mandrosoa tsara tsy misy residu!
- Azo afangaro amin'ny mpiasan'ny antifreeze, hanatsarana ny fahombiazan'ny fanadiovana amin'ny ririnina. Fanamarihana: Mariho tsara fa famolavolana fahavaratra ity. Tsy hisakana ny rano tsy hangatsiaka ao anaty tankinao izany.
- Ity takelaka fanasana lamba fitaratra ity dia hitahiry vola be aminao raha oharina amin'ny fividianana ranon-tsasana «mahazatra».
Takelaka fanadiovana 10 sosona fanadinana, Hahazo takelaka 40 amin'ny fandroana wiper ianao.
- Soloy ny tsiranoka fanadiovana nentim-paharazana! Mety kokoa amin'ny fitaterana sy fitehirizana ilay takelaka raha oharina amin'ny kapoaka mahazatra.
Ahoana ny fomba fampiasana tablette fanadiovana mahomby?
1: Arotsaho anaty rano tavoahangy ny takelaka, ary rehefa levona dia araraka ao anaty tanky ary fenoy rano.
2: Sasao na kosohy ny takelaka, araraka ao anaty fitoeran-drano mpanasa lamba izy ary fenoy rano.
Minitra vitsy dia rava ny tenany, ary dia izay.
Ny kalitao dia mitovy amin'ny wiper € 4 na € 5 isaky ny tavoahangy 5 litatra avy amin'ny magazay na ny mitovy aminy,
ary tsy mila lazaina, be vidy kokoa!
Fampahalalana misimisy kokoa, azafady tsindrio Eto!
Sokajy Uncategorized Leave a comment
Fa maninona no mampiasa fiara manasa tànana tsy manafina?
Aogositra 6, 2020 Aogositra 6, 2020 by admin@opskar.com
Sasao fiara tsy misasa vs mifanasa tanana
Ny fanasana fiara tsy misy mikasika dia fantatra ihany koa amin'ny fanasana fiara simika, ary mampiasa Sodium, savoka hanasana fiara izy.
Ity karazana fanasana fiara ity dia nanjary nalaza ho mpiorina tontolo iainana tena tsara fanoloana ny nentin-drazana
fanasana fiara mandany rano. Ny fanasana fiara tsy misy fifandraisana dia mety hanampy indrindra any amin'ny faritra tratry ny haintany, izay olana amin'ny tsy fahampian'ny rano.
Betsaka ny vokatra fanasana fiara eny an-tsena, ary ny vokatra tsirairay dia miavaka amin'ny fananana mavitrika.
Ny karazana vokatra OPS voalohany tsy misy fanasana fiara dia misy akora simika toy ny sodium gluconate,
Isosteareth handrava ny loto sy hanadio tsara ny fiara. Ny vokatra dia misy akora voajanahary sy voajanahary
izay voajanahary, solika ary tsy misy poizina. Fomba iray hafa no vita avy amin'ny savoka carnauba ary malaza izy io
miaraka amin'ireo mpankafy fiara izay mankafy vokatra iray izay samy manadio sy savoka ary afaka mamirapiratra fiara.
Na eo aza ny karazany maro ny vokatra fanadiovana fiara tsy misy fikasihana azo alaina, dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny fomba mandaitra ny tsirairay
manasa fiara. Rehefa araraka ao anaty fiara, dia mamatotra ireo sombin-tany ireo mpitsikilo ireo mba hivoahana azy ireo
ambonin'ilay fiara. Manaraka, nanasa azy tamin'ny tsindry fanasan-damba avo hatrany ambany ka hatrany ambony.
Ho fanarahana azy, lamba famaohana malefaka na lamba famaohana mikrofiber no azo ampiasaina hanangonana ny sisa tavela.
Raha ampitahaina amin'ny fanasana fiara nentim-paharazana, ireo vokatra fanasana fiara ireo dia afaka mitsitsy fotoana sy mitahiry rano.
Ny ora mando sy ny fanamainana dia esorina, noho izany ny fotoana ilaina hanasana fiara iray manontolo amin'ny alàlan'ny OPS ivelany
ny vokatra fanadiovana dia azo tapahina roa. Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ny vokatra fanasana fiara dia manondro izany mahazatra
Ny fanasana fiara ao an-trano dia mampiasa rano hatramin'ny 200 litatra. Ankoatr'izay, ny fanasana fiara nentim-paharazana ao an-trano dia afaka
miteraka "fako misy poizina", satria ny rano maloto feno loto, fotaka ary menaka dia afaka miasa miaraka amin'ny fiara
sy ny tontolo iainana.
Na eo aza ireo tombony azo tsaboina "sariaka maintso" ireo dia mbola manana olona tsy mino ihany ireo vokatra fanasana fiara tsy misy taratra.
Mpandraharaha fanasana fiara nentim-paharazana maro no mampitandrina ny amin'ny loza amin'ny fampiasana simika hanadiovana ny atin'ny fiara,
izay mety hiteraka fahasimbana lehibe eo amin'ny loko. Ary koa, miaraka amin'ireo vokatra madio maro karazana eny an-tsena,
maro no misy akora tsy voaporofo na tsy fantatra. Soso-kevitra mialoha ny hividianana ireo vokatra ireo,
ny mpanjifa dia tokony hikaroka ny akora mavitrika isaky ny vokatra hahazoana antoka fa azo antoka ny fampiasana azy ireo
fiara misy fiatraikany kely amin'ny farany.
Ny tsiranoka Windshield Washer tsara indrindra 2020
Jolay 28, 2020 Jolay 28, 2020 by admin@opskar.com
Noho ny antony fiarovana, dia ilaina ny fitazomana ny fanatsinan'ny fiara ho an'ny fiara!
Ny takelaka fanasana fanamainana OPS dia rindrina mahery vaika sy fanenon-tena amin'ny tontolo iainana manentana azy
manome antoka ny fahitana mazava. Madio sy manaratsy ny varavarankely ivelany sy maina tsy mandao làlana na residu.
Ny takelaka tsirairay dia mifangaro amin'ny rano alohan'ny handatsahany izany ao anaty fitoeran'ny fiara.
Ireo takelaka fanasan-drivotra fitaratra ity dia atao any Chine ary miovaova fotsiny.
Rifotra voaroy vita amin'ny takelaka efamira namboarina mivantana tao anaty kamiao
natokana ho an'ny ranon-tsasana fanasana lamba fitaratra amin'ny fiaran'ny fiaranao, miampy paompy na rano tavoahangy 4.0 litatra.
Tehirizo vola be amin'ny onjam-pandrefesana varatra anao. Eny tokoa, ny fampiasana tableto wiper iray
mihena ao anaty rano fisotro dia misisika hatramin'ny 4.0 litatra ny vokatra nentin-drazana nentim-paharazana.
Misaotra ny endrika takelaka sy ny fitrandrahana azy ao anaty boaty kely notazonina tao amina poketranao, paosinao.
Ohatra, ity tablette fanadiovana effet ity dia vonona ny hampiasa azy io ary tena mora ny diloilo.
Aza hadino ny momba ny amponga izay mandeha amin'ny vatan'ny fiara-nao. Ny mahasorena ny wiper amin'ny rivotra dia mahomby,
ekolojia, ary mihoatra ny tena toekarena: boaty misy takelaka folo,
izay mitovitovy tsiranoka 40 litatra amin'ny tsiranoka mofomamy vita amin'ny rivotra, ary mitentina 2.15 dolara fotsiny ny vidiny.
- Ho an'ny: Mora vidy sy mahomby.
- Endri-javatra: mifantoka be, be toekarena.
- Fiarovana: Tsy mamela antsanga. Tsy atahorana hoso-doko sy plastika ary robina.
- Karazan-drano: Rano tap, rano mineraly, rano voadio, rano deionisialy. (Aza mampiasa ny rano anaty).
- Manohitra: Tsy mandeha mandritra ny taona ny modely iray ihany.
- Fahafahana: Takelaka 5 grama tokana eny an-tsena. Mifantoka kokoa, fanadiovana mahery vaika!
Ny takelaka fahitana iray dia ampy hamokatra hatramin'ny 4L mahery amin'ny tsiranoka fanamafisam-peo mahery.
Antifreeze ny takelaka, ka hiaro anao hatramin'ny 0 degre Celsius ny tankinao.
mamela anao hampiasa ity vokatra ity mandritra ny taona iray saika any amin'ny firenena maro.
Ho an'ny hafanana sub-zero maharitra, azonao ampiana ny antifree mahazatra anao.
Tena toekarena: ho an'ny kely noho ny vidin'ny barika, dia namonjy ny vidiny in-3-4.
Mivarotra mora, tsy mila mitahiry amponga tsy misy ilana azy intsony ianao.
ary afaka mitahiry mpanasa fampidiran-drano maro litatra any anaty toerana kely ianao.
tontolo iainana: Takelaka biodegradable, tsy misy phosphate.
Ny fampihenana ny famoahana CO2 na eo amin'ny fitaterana na eo amin'ny fananganana amponga sy ny fanodikodinany.
Ny fomba fampiasana: Nametraka takelaka iray ao anaty fitoeran-davaky ny sininao ianao ary mameno rano mandeha
(ny takelaka dia misy fitsaboana fananganana vita an-tsokosoko vita). Rehefa afaka 10 minitra dia latsaka tanteraka ny takelaka
nefa tsy manisy ambiny. Mety tsy mety any an-dafy satria mety tsy maintsy ataonao
manohitra ny fandroana na mampiasa ny tsiranoka moto miaraka amin'ny menaka alikaola.
Mitady mpanamboatra takelaka mpanasa Windshield azo itokisana, Laharana fandraisana na rohy antsika!
Mpanadio Car anatiny tsara indrindra 2020
Jolay 23, 2020 by admin@opskar.com
Ahoana ny hisafidianana ny vokatra tsara indrindra hanadiovana ny anatiny anatiny?
Tokony ho fantatrao fa ny toerana maloto indrindra ao anaty fiara dia ireo toerana izay kasihinao, midika hoe ny familiana
kodiarana, fehikibo seza, ny bokotra miova ary ny valin'ny varavaran'ny sisin'ny mpamily. Ny "V" eo anelanelan'ny tongotrao,
izay mampivonto ny Egg McMuffin sy ny kafe koa dia mety maloto. Tadiavo ireo singa ireo ary
mikasa ny handany minitra vitsivitsy fanampiny hanadiovana azy ireo.
Rehefa manadio fehin-kibo ianao dia aza mampiasa detergent voajanahary sy tsy miandany.
Izy io dia hiaro ny fahamarinan'ny lamba fehikibo.
Ny dashboard sy ny takelaka mitondra fiara dia tokony hofafana miaraka amin'ny lamba mandrovitra amin'ny rano.
Mba hanaisotra grime, mampiasa fitaovana fanadiovana iray manontolo, manondraka rano. Toy ny mahazatra, ampiasao azo atao ny vokatra mora indrindra.
Mila miala amin'ny fofona ve?
Miasa tsara ny OPS, It deodorises rehefa manadio ary mandao fofona vaovao ao anaty fiara.
Na inona na inona ataonao amin'ny fiara ataonao, malemy fanahy. Noho ny mpanamboatra '
fahana hitahirizana aody, ary ny faniriana hampiakatra ny toekarena solika EPA, betsaka
Mampiasa fitaovana tsy dia maharitra kokoa ny mpanamboatra. Raha mampiasa vokatra ratsy kokoa ianao,
mety hanimba na hanimba ny fiarakaranao mandrakizay.
Mpanadio atin'ny fiara OPS vita amin'ny angovo voajanahary sy ekolojia,
dia azo ampiasaina ho an'ny faritra sarotra arahana izy io ary manome voka-dratsin'ny haingam-pandeha haingana sy haingana.
Ny madio esorina tsara sy malefaka ny vovoka arabe, bibikely, nikotina sy silikon.
Izy io dia mifanentana amin'ny hazavana rehetra ary manolotra mifanaraka tsara tokoa, ohatra, ny sary, ny fingotra, ny hoditra,
singa amin'ny plastika ao anaty fiara sy tapaky ny fiara.
Ahoana ny fampiasana ny lamba mora ny angovo enzyme?
Aforeto ny vovony na ranony hitetezana tavoahangy. Manomboka amin'ny alàlan'ny rano-a-80.
Fifantohana sy fikosehana tsara. Raha tsy mandeha izany dia ampitomboy miadana ny tahan'ny mandra-pahombiazanao.
Ampianarina amin'ny tany maloto, ampiasao ny lamba vita amin'ny lamba, lamba famaohana, lamba vita amin'ny micro-fibre na sponjy
zarao isaky ny faritra mba hodiovina.
Afaka ampiasaina amin'ny fanadiovana ny atin'ny fiara mpandeha, 4wd's, moto,
fiara fitaterana an-dranomasina sy ara-barotra ary koa ao an-trano na birao.
Zavaboary sy biodegradable.
Tehirizo ny vidiny, toekarena ampiasaina
Deodorises rehefa manadio
Manala ny ankamaroan'ny loto & tasy
Te hamorona amin'ny toe-javatra voafaritra tsara ho an'ny fiaranao, trano na birao ve ianao? Mifandraisa aminay Eto!
Inona no fitaovana fanasana fiara tsy misy kitay
Jolay 18, 2020 by admin@opskar.com
Inona no atao hoe tsy manasa fiara mandro?
Ny fanasana fiara tsy mifandray dia mampiasa mpanasa avo sy zavatra simika avo lenta diovy amin'ny fiara fa tsy hikasika izany.
Ny tombony lehibe amin'ity karazana fanasana fiara ity dia ny fahasimbana eo amin'ny fiara tsy simba amin'ny fomba
mety ho fanasana fiara izay mampiasa borosy. Tsy ireo fanasana fiara ireo ihany no manolotra fomba haingana sy mora
manadio fiara, nefa koa izy ireo dia mahomby amin'ny fanesorana ny loto.
Raha misy fiara miditra anaty tranom-paty, dia tsy ilaina ny manasa sy manasa tànana,
amboary ny shampoo fanasana fiara na savony, ary atsofohy mivantana amin'ny fiara avy any ambany ka hatrany ambony.
Ny vahaolana fanadiovana dia avela hipetraka ao anaty fiara mandritra ny fotoana kelikely, ary avy eo hanasa. Rehefa voadio ny fiara,
ny fandroana avo lenta dia atsofoka amin'ny alàlan'ny fiara, tazo ary manakana ny fananganana tohodrano.
Misy endri-javatra maro azo ampiasaina amin'ny fanasana fiara tsy mifandray izay azon'ny olona fidiana
dia efa nihatra amin'ny fiarany. Ny fanasana fiara tsy mifandray dia afaka manadio ny fitaovam-piadiana sy kodiarana.
ho fanadiovana ny vatan'ny fiara. Azo atao koa ny manisy sosona savoka
amin'ny alàlan'ny rafitra mitovy tsy misy fifandraisana. Ireo safidy ireo dia vita alohan'ny maina ny fiara.
Ireo vahaolana samihafa dia azo ampiasaina hanadiovana ny fiara amin'ny fandroana fiara tsy mifandray.
Ny savony ampiasaina dia afaka mamofona na loko ary matetika asidra na alkaloida.
Ity elanelana kely ity avy amin'ny faritra hidrogen (pH) dia manampy amin'ny famafana ny loto avy amin'ilay fiara.
Betsaka ny serivisy fanasana fiara tsy mifandray amin'ny tanana no manome vahaolana ho an'ny tontolo iainana.
Tompon'ny fiara maro no misafidy ny hampiasa fanasana fiara tsy mifandray satria miaro ny asan'ny loko ny fiara.
Ary koa, tsy misy ny rollers na singa mekanika izay afaka mifandray amin'ny fiara ary manimba ny fitaratra na antena.
Ankoatra izany, a Ny fanasana fiara tsy mifandray dia mety ho vita haingana, mahatonga azy io ho safidy tsara ho an'ny olona iray miaraka
tsy misy fotoana handroanana ny fiara amin'ny tanana.
Na dia toerana fitaterana fiara tsy misy fifandraisana aza dia safidy malaza ho an'ny tompona fiara.
tsy dia mamela ny fiara ho madio toy ny fanasana fiara nentim-paharazana izy ireo.
Satria ny fitaovana fanasana fiara sasantsasany dia tsy nisy fiantraikany tsara.
Ny vovobony fanasana fiara tsy misy rano amin'ny OPS dia afaka manamboatra ny fahaiza-manao sy ny fahadiovana mahery vaika
shampoo, savony, mpanasa. Hamono ilay nentin-drazana. Mahaliana kokoa? Azafady mba mifandraisa aminay Eto!
Sokajy Uncategorized 2 Comments